Ancelotti: Sida lagu joojin karoLionel Messi – Gool FM
Hase yeshee, tababaraha reer Italia, kaas oo guul 2-1 ku hogaamiyey Real Madrid fiinaalahii Copa del Rey ee 2013-14, ayaa ku adkeysanaya in aysan muhiim ahayn diiradda oo la saaro lambarka 10-naad ee Barca kulanka kahor.
“In aad kulan u diyaarisid Messi ma aha suuragal,” ayuu yiri Ancelotti.”Messi waa cajiib hadii aad rabtoin aad kulan ugu diyaar garowddo Messi, hagaag, waa in aad iska ilaaliso ka hadalkiisa ee ku saabsan xifraddiisa iyo kartiddiisa.
“Messi waa hibo cajiib ah,haddii aan ciyaaryahanadaada kala hadasho xirfaddiisa,markaa wey ka cabsan doonaan maxaa yeelay waxaan qabaa in uu yahay hibo sare.
“Markaa,sheyga ugu muhiimsan waa in aad ka dhowr sanaatoka hadalkiisa,sida aan hore u sheegay kulanka diiradda saar.”
Qiimaha lagu iibsan karo maaliyada Pato ee Chelsea oo si wayn hoos loogu dhigay!
Aabaha Arjen Robben oo ka war bixiyey xaalada dhaawac ee inan kiisa. Goorma ayuu soo laaban doona?)